Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Fanjakam-behivavy ?
Inty sy Nday: Fanjakam-behivavy ?
Efa manomboka manome lanja ny atsoina hoe « mira lenta » tokoa ve ny eto Madagasikara ? Izany no mby an-tsaina tato anatin’ny fotoana lavalava izao, raha ny tontolon’ny fitantanana raharaham-panjakana sy ny fisahanana andraikitra ara-panjakana ambony no asian-teny.
Io fampitoviana na famenoana tarehi-marika eo amin’ny lahy sy ny vavy io tokoa aloha dia tokony anokafana ady hevitra fa tsy entina amin’ny fihetseham-po e ! Misy mantsy ny mitady hanao amboletra fotsiny hoe « ezahina ny hitovian’ny isan’ny lahy sy ny vavy eo amin’ny fampiandraiketana raharaha ambony ara-panjakana ».
Tokony ho ny fahaiza-manao sy ny traikefa ihany no mibaiko fa raha izany dia tsy misy hafa amin’ilay hoe « fifandanjana isa-paritra ». Tsy inona io fa ilay hoe « tsy maintsy asiana solontena avy amin’ny faritra izao na izatsy ao anatin’ny rafi-panjakana ». Dia matahotra an’iny ny mpanapa-kevitra na te haka ny vaton’ilay faritra rehefa fotoam-pifidianana dia irosoana izay mahafinaritra ny olona sasany ao, nefa tsy voatery hahasoa an’ilay faritra.
Ny fitondrana Rajaonarimampianina dia hitahita soritra ho mitady hanome vahana ny famenoana tarehi-marika amin’ny alalan’ny fihetseham-po, nefa rehefa nomena andraikitra na nirosoana ny raharaha dia zary namoa-tsampona.
Ohatra : Noindraindraina aoka izany fa misy andriambavilanitra tena mahavita azy manodidina an’Ingahy Filohampirenena. Iray tamin’ireny i Claudine Razaimamonjy. Aiza izy izao ary inona no nihafarany hatreto ? Tsy latsa-danja amin’izany ny Me Nicole Andrianarivoson. Nataony nahalala ny anarany mihitsy moa izay sehatra rehetra nolalovany nandritra ny naha-tao an-dapa azy. Nankaiza koa izy taty aoriana ? Dia iny vao nisaorana iny koa i Herisoa Razafindrakoto, izay nampiantsorohana ny andraikitra ny tale vonjimaika nitantana ny kabinetra sivilin’Ingahy Filohampirenena nandritra ny fotoana lavalava. Nalefa aiza koa taorian’io ?
Tsy horesahina eto intsony na tanisaina aza ny momba an-dRtoa Voahangy Rajaonarimampianina, satria fanta-poko fanta-pirenena ny fihetsiny eo anivon’ny fiadidiana ny repoblika sy ny rafitra ambonin’ny departemanta ministerialy amin’ny ankapobeny.
Dia niroso tamin’ny fandraisana fanapahan-kevitra amin’ny fanendrena izay masoivohom-panjakana malagasy any ivelany koa tato anatin’ny herinandro vitsy ny filohampirenena. Mahazo tombony koa aloha ny vehivavy hatreto satria raha telo mianadahy no voatendry dia ny roa ireo vehivavy nahazo sehatra any amin’ny fanjakana na rafitra iraisam-pirenena goavana. Rtoa Rakotomalala Mireille, ohatra, nalefa any Japana raha notendrena any amin’ny Masoivohom-panjakana malagasy any anivon’ny Firenena Mikambana Rtoa Razafitrimo Lala Arisoa.
Misy anaram-behivavy iray koa re siosio any ho any fa efa nifampiresaka tamin’Ingahy Rajaonarimampianina mivady tany Eraopa tany, roa volana eo izao, izay mety hotendrena ho Praiminisitra.
Ny ministeran’ny Mponina moa dia toa natokana hosahanin’ny vehivavy. Toraka izany koa ny ministeran’ny Fitsarana.
Izahay tsy milaza hoe tsy mendrika hitantana na hisahana andraikitra ara-panjakana ambony ny vehivavy. Tsia. Ny mira lenta dia toavina tanteraka ara-poto-kevitra, saingy tsy mety raha ny fihetseham-po no ifotorana amin’izany. Na lehilahy koa aza no tendrena na ampisahanina andraikitra dia tsy mety raha amin’ny alalan’ny fihetseham-po fa tsy noho ny fahaizany sy ny traikefany no ifotorana. Raha ny hita hatreto anefa aloha dia aoka indramina ilay fomba fiteny hafahafa indraindray hoe « fanjakam-behivavy ».